हडपेको जग्गा नेकपालाई उपहार, सरकारी ढुकुटीबाट पार्टीको घर तयार
हडपेको जग्गा नेकपालाई उपहार, सरकारी ढुकुटीबाट पार्टीको घर तयार शृ‍ंखला-३
खिलानाथ ढकाल झापा - आइतबार, असार २१, २०७७
दमक नगरपालिका-८ (साबिक-१३)मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नगर कमिटी कार्यालय छ।
उक्त कार्यालय दुई पार्टी एकीकरण हुनुपूर्व माओवादी नगर कमिटीको थियो। एमाले-माओवादी एकता भएर नेकपा बनेपछि एमालेहरू पनि त्यहीँ ‘बसाइँ’ सरेका छन्।
तीन तले कार्यालय महलजस्तै छ। नेकपाको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयजस्तै सुविधासम्पन्न देखेपछि पूर्वएमालेहरू पनि लोभिएर यतै जान थाले।
पूर्वएमाले पनि जान थालेपछि नेकपा दमकको कार्यालय त्यहीँ कायम भएको छ।
दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपाको उक्त पार्टी कार्यालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। प्रधानमन्त्रीको गृहनगरको त्यही पार्टी कार्यालय भने ऐलानी जग्गा ‘हडपेर’ स्थापना गरिएको छ।
नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय दिने व्यापारी स्व. आङछिरिङ शेर्पा हुन् भने दमकको पार्टी कार्यालय ऐलानी जग्गामा बनाउने नवधनाढ्य दमकका स्थानीय नेकपा नेता रेवतराज पुरी हुन्।
‘गगन’ भनेर चिनिने पुरी दमकमा अर्बौंको सरकारी र सुकुम्बासीका नाममा फिल्डबुक कायम भएको जग्गा आफ्नो नाममा हत्याउने व्यक्ति हुन्।
दमक नगरपालिकाका मेयर रोम ओलीका अनुसार पार्टी कार्यालय पाँच कठ्ठा क्षेत्रफलमा छ, त्यो ऐलानी जग्गा हो। कार्यालय रहेको जग्गा रतुवाको बाँध बाँधेर बचेको खोला उकास जग्गा हो।
नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय दिने व्यापारी स्व. आङछिरिङ शेर्पा हुन् भने दमकको पार्टी कार्यालय ऐलानी जग्गामा बनाउने नवधनाढ्य स्थानीय नेकपा नेता रेवतराज पुरी 'गगन' हुन्।
‘पहिले माओवादीहरू बस्थे, अहिले नेकपाको कार्यालय छ, खोला उकासको ऐलानी जग्गामा पार्टी कार्यालय स्थापना गरिएको छ,’ ओली भन्छन्, ‘प्रयोगविहीन जग्गा भएकाले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दा खासै प्रश्न उठ्ने गरेको छैन।’
यो कार्यालय चर्चिन दमकका नवधनाढ्य पुरीको भरपुर मेहनत छ। पुरीले यो पार्टी कार्यालय नेकपालाई दिलाएर दमक बालुवाटार जग्गा घोटालाको तानाबाना रच्न लामो मेहनत गरेका छन्।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन माओवादीका लागि पार्टी कार्यालय खाँचो पर्‍यो। पुरीले बालुवाटार जग्गा बाँध बाँध्दा जोगिएको त्यही ऐलानी जग्गा देखाए। पार्टी कार्यालय बनाउन अग्रसरता लिएर खाँचो टारिदिए।
दुई वर्षमै पुरीको अगुवाइमा पार्टी कार्यालय ठडियो। पार्टी कार्यालय नै खोलिदिएपछि पुरी नेताहरूको नजरमा ‘दाता’ र ‘समाजसेवी’ भनेर चिनिन थाले।
पार्टी कार्यालय स्थापना गरिएपछि पुरीले सहिद स्मृति तथा जनयोद्धा संरक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरे। सहिद र जनयोध्दाका नाममा बजेट ल्याउँदै व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न थाले।
दुई वर्षअघिसम्म पहिलो तलामात्र रहेको पार्टी कार्यालय अहिले तीन तलाको छ। कार्यालय विशाल बनाउन पुरीले प्रतिष्ठान स्थापना गरेर सरकारी ढुकुटीबाट यहाँ बजेट खन्याएका छन्।
पार्टी कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन इलामस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयबाट ९० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो प्रदेश नम्बर १ का ठूला आयोजना हेर्ने कार्यालय हो।
गत वर्ष प्रतिष्ठानले सामुदायिक भवन बनाउन भनी कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। उक्त कार्यालयले ‘नाइनास्ती’ नगरी ९० लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो।
तर, सामुदायिक भवन बनाउन कार्यालयले दिएको बजेट पुरीले पार्टी कार्यालयमा खर्च गरेका छन्। पार्टी कार्यालयकै तेस्रो तलामा ‘सामुदायिक भवन’ निर्माण गरिएको दाबी गरेका छन्।
यहाँ प्रश्न उठेको छ, ऐलानी जग्गामा सामुदायिक भवन कसरी बनाउन मिल्छ? र, पार्टी कार्यालयभित्रै सामुदायिक भवन किन बनाउने?
सामुदायिक भवन निर्माण विनियोजन गरेको उक्त रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भनेर बजेट दिने कार्यालयले नखोजेबाट पनि अनियमितता उजागर भएको छ।
‘यहाँ स्थापना गरिएको भवन कुन समुदायलक्षित छ भनेर किटान गर्ने र सरकारी ढुकुटीबाट खर्चेको भवन पार्टीलक्षित हुने या समुदायलक्षित?,’ नेपाली कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ का सभापति ढुण्डी भण्डारीले भने, ‘म नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि भएर यो प्रश्न गरिरहेको छैन। मनपरी किन गरियो भनेर सोधिरहेको छु।’
कार्यालय प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले भने, ‘कार्यालय मर्मत, झ्यालढोका लगाउन भनी दुई पटक गरेर यस कार्यालयबाट ८५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।’ उनले पार्टी कार्यालय बनाउन बजेट विनियोजन गरियो भन्नेबारे थप बताउन सकेनन्।
इलाममा रहेको उक्त कार्यालय एक नम्बर प्रदेशका ठूला आयोजना तथा भवन निर्माण गर्न स्थापना भएको कार्यालय हो। केन्द्रबाट विनियोजित बजेट र कार्यान्वयन भएका योजनाहरू हेर्न यो कार्यालय स्थापना भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर भएकाले दमकमा थुप्रै भवन तथा विकासे काममा बजेट खन्याइएको छ। त्यसैमध्येमा परेको सामुदायिक भवन भने ऐलानी जग्गाको पार्टी कार्यालयमै बनाइएको हो।
‘पुरीको समूहले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा बजेट ल्याए, ऐलानी जग्गाको पार्टी कार्यालयमै सामुदायिक भवन बनाए,’ दमकका एक पूर्वएमाले नेता भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा ऐलानी जग्गामा पार्टी कार्यालय राख्न र त्यहाँ यतिका बजेट कसरी प्रयोग गरे कसैले खोजेको छैन।’
नेताहरूका अनुसार उक्त प्रतिष्ठानका हर्ताकर्ता पुरीसँगै दुर्गा चम्लगाईं र झलकसिंह दर्लामी हुन्। दर्लामी सो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन्, पुरी सचिव। प्रतिष्ठानको सचिवको हैसियतमा पुरीले अलग्गै ठाउँमा जग्गा नरहेको अवस्थामा सामुदायिक भवन त्यही ऐलानी जग्गामा बनेको पार्टी कार्यालयमै निर्माण गराए।
नेकपा दमकका अध्यक्ष बोधप्रसाद घिमिरेका अनुसार दुई पार्टी मिलेर नेकपा भएपछि अधिकांशको रोजाइमा पुरीले चर्चेको कार्यालय नै पर्‍यो। ‘सबै जना उतै जान थाले, पूर्वएमालेले किनेको जग्गामा अहिले पनि कार्यालय छ, त्यहाँ जनवर्गीय संगठनका गतिविधि हुन्छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘ऐलानी जग्गामा पार्टी कार्यालय छ, यहाँ कार्यालय राख्न कति उपयुक्त हुन्छ हुँदैन यस विषयमा हामीमात्र जिम्मेवार छैनौं, यो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र हो। उहाँले पनि सोच्नुहोला नि!’
बालुवाटारमा पुर्ख्यौली जग्गा पनि भएका पार्टी कार्यालय नै स्थापना गरेपछि पुरी नेताहरूको नजरमा पर्न थालेका हुन्। उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मानिन्छन्।
पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै गएपछि पुरीले जग्गा हत्याउने ‘तानाबाना’ रच्न थालेका थिए। बालुवाटार जग्गा पुरीले आफ्नो नाममा ल्याउन प्रपञ्च जोडतोडले रचेको पनि २०६४ सालपछि नै हो।
२०६५ सालमा सिँचाइ विभागले रतुवामा बाँध बाँध्ने योजना ल्यायो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बखत पुरीको जोडमा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो।
रतुवामा बाँध बाँध्न पुरीले राजनीतिक स्वार्थका लागि सक्रियता देखाएका थिएनन्। बाँध बाँध्दा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भएको छ। बाँध बाँध्दा रतुवाको जोखिममा रहेको उनको पुर्ख्यौली झन्डै २५ बिगाहा जग्गा जोगिएको छ। सँगसँगै पुरीले सुकुम्बासीको नाममा फिल्डबुक कायम भएको जग्गा पनि जोगाएर आफ्नो नाममा ल्याएका छन्।
रतुवा नदी पश्चिम र दिपेनी खोला उत्तरको उक्त जग्गा अहिले प्रतिकठ्ठा ३० लाख रूपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ।
गत कात्तिकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष दाहालनिकट विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गीसहितको टोली ‘बालुवाटार’ पुगेको थियो। पुरीले सुमार्गीसहितको टोलीलाई ‘बालुवाटार’ फाँट देखाएका थिए।
पुरीको नाममा आएको जग्गामा पहिले करिब ८८ परिवार सुकुम्बासी बस्थे। भूमिसुधार सक्रिय भएका बेला उनीहरूलाई जग्गा दिने प्रक्रिया थालिएको थियो। २०४२ सालमा रतुवा खोलामा बाढी आउँदा बस्ती बगायो। सुकुम्बासीहरूको बास उठ्यो।
त्यो फाँटको जग्गामा १६ अर्ब लगानी गरेर विश्वस्तरको पार्क बनाउने उनीहरूले प्रचार गरे।
त्यो प्रचार जग्गाको मूल्य बढाउने उद्देश्यले गरिएको थियो। पार्क बन्ने हल्ला पिटाएर जग्गा महंगोमा बेच्ने पुरीहरूको योजना थियो।
‘बालुवाटार जग्गामा स्थानीयदेखि चलेका जग्गा माफियाहरूको चलखेल छ,’ नेकपा दमक अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘सानोतिनो चलखेलबाट यो जग्गा पुरीको नाममा आएको हैन।’
बालुवाटारमा आँखाले नभ्याउने ५० बिघा ऐलानी जमिन छ। त्यो जमिनमध्ये पुरी एक्लैको नाममा ३० बिगाहा देखिएको दमक प्रहरीको अनुसन्धानले नै देखाएको छ। बाँकी रहेको जग्गा टुक्रा-टुक्रा पारेर पुरीले विभिन्न व्यक्तिलाई बेचिसकेका छन्।
दमकमा अहिले रिङरोड धमाधम बनिरहेको छ। मुख्य चोकबाट दक्षिण हुँदै रिङरोडले ऐलानी जग्गामा रहेको नेकपाको कार्यालय हुँदै बालुवाटार जग्गालाई समेत छुन्छ।
रतुवाको पाता कस्दासम्म बालुवाटार जग्गाको हैसियत उच्च थिएन। २ नम्बरबाट सुरू भएर ७, ८, १० हुँदै ४ र ३ नम्बर वडा फेरो मारेर रिङरोड टुंगिन्छ।
२०७२ सालपछि रिङरोडको सीमांकन सारेर रतुवा खोलाको डिलको बाँधैमा पुर्‍याइयो। ‘त्यसको उद्देश्य बालुवाटार जग्गालाई छेक्नु थियो,’ घिमिरेले भने, ‘पुरीले हडपेको जग्गा छेकेर रिङरोड गएको छ।’
धमाधम पिच भइरहेको हुनाले रिङरोडले छोएको बालुवाटार जग्गाको मूल्य उक्लिएको छ। बालुवाटारको जग्गा अहिले मूल्यवान् बनेको पनि रिङरोडले छोएर नै भएको स्थानीय बताउँछन्।
नेता घिमिरेका अनुसार दमकमा रिङरोडको अवधारणा २०५२ सालतिरै आएको हो। पहिले सीमांकन गर्दा रिङरोड दमक चोकबाट दक्षिण हुँदै लैजाने योजना थियो।
रिङरोड अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने बेला दमक नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहाल थिए। पुरीका छिमेकी दाहालले बालुवाटार जग्गा छेकाएर रिङरोड कार्यान्वयनमा ल्याइदिएको घिमिरे बताउँछन्। हत्याएको सरकारी जग्गा दाहालले नै २०७१ सालमा नगरपालिकाबाट पुरीलाई भोगाधिकारको अधिकार दिलाएका थिए।
साढे ५ अर्बकाे जग्गा हडप्ने पुरीलाई ओली र प्रचण्डकाे संरक्षण
सुकुम्बासीकाे ५० बिघा जग्गा : दिने पञ्चायत, खाने गणतन्त्रकाे नेकपा
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २१, २०७७